Rwendo rwekutanga - Afrikhepri Fondation
Chishanu, kubvumbi 16, 2021
kugashira TEXTS OF MATTHIEU GROBLI
Kuverenga: 35 mins
I Ndiri kuda kutaurira nyaya isinganzwisisike uye inonakidza. Iyi inyaya yeiyo recluse yakabatwa pakati pekuremerwa kwemuviri iyo zuva nezuva inopera simba uye mweya unogara uchipukunyuka, nyaya yemurume mumwechete mukutsvaga kwamwari anogara akanyarara.
Yakatangwa pausiku husiku hwakanaka, ndakanga ndiri muimba yangu yekurara uye ndakakumbirwa kupa chinangwa kuti ndivepo. Kunyengera kumushure wangu, ndakanga ndichirota nezvehupenyu hwepantasmagorical kwandakanga ndichirota pamusoro pehupenyu hwepantasmagorical. uye kubatana kunogona kutonga.
Iyi nyika ine nyika yandaive nayo mumusoro mangu, yakamirira chibereko chetariro yangu.
Tinoda kufara nezvinhu zvinofadza zveparadhiso yakadai, asi isu tinoitei? Varume vanongofarira kufara uye kunyunyuta nguva yose. Vanodanidzira pamusoro pematambudziko avo vachiri kumiririra rubatsiro rwekuponesa. Asi, ndakaramba kuramba ndisingafungi nokufunga kuti mamiriro ehupenyu aizofarirwa neni. Ndaingofanira kupa chinangwa muupenyu hwangu. Zvadaro, ndakatora chisarudzo kuti ndirege kufunga ndichitanga kuita. Ndichimhanya kubva pamubhedha, ndakazviwana ndiri kuruboshwe rworutivi rwembhedha, ndakamira pamakumbo maviri.
Zvadaro, nekutenda kwakasimba kwezvandaida kuita, ndakafamba nechiremera kunzvimbo yekugezera. Pakarepo pandakapinda mukamuri, ndakamira pamberi pechioni chikuru chakakomberedzwa nematombo akajeka.
Kutanga, ndakaramba ndichivhiringidzika pandiri sezvo kumeso kwechiso changu pagirazi rakakwenenzverwa chaive chakafanana neicho chandakaona nguva dzese pandakanga ndazvitarisa mugirazi, nemusiyano wekuti, panguva ino, ndaive nemimvuri yerima pasi maziso angu nebvudzi rakanyangara. Ndakatarisa pamufananidzo wangu mugirazi, ndakazvibvunza kuti: “Chiso ichi chaimirirei? "" Ndeipi yaive yekufananidzira zvinoreva izvi zvakapetwa? "
Ichi chiratidzo chakaratidza iyo I iyo yakanga isiri ini pachangu, kune imwe nhanho iyo Kutaridzika kweumwe. Nekudaro, isu patinozvitarisa pachedu mugirazi rengano tinobva taziva kukosha kwekutaridzika kweKumwe mukuvapo kwedu, nekuti inomiririra dombo rekona rinokosha panheyo yehumanism: "iri nerimwe iro ini, ini iri neimwe iyo yandiripo ”.
Kununurwa nezvandakanga ndangobva kunzwisisa, ndakabva pagirazi apo kamwe-kamwe, kupenya kwepachiedza kwakaputika pfungwa dzangu. Ndakanga ndangobva ndawana kupukunyuka kunharaunda iyi, kuomesa uye inotyisa sezvandakasara, ndiri ndoga, pachikepe kuitira kukunda kweGirairi.
Ndichikanda dzimwe nguo musutukesi yangu, munguva pfupi ndakange ndichifamba pamakungwa, ndichitsvaga chinonakidza chiitiko chaizounza manzwiro akawanda.
Ndakanga ndichingofamba kwemwedzi miviri mumhenderekedzo yegungwa, ndichikurumidza kuenda, ndine tariro yakawanda pane imwe neimwe nenguva imwe chete, ndakanga ndashanyirwa nezuva rakauya kunondinyaradza, kusvikira pakuguma kwezuva.
Kubva Port-buri kabhini yangu, ndakakwanisa kuona mwedzi achipenya pamusoro zvitema nzvimbo penyanza uye Ndaiyemura, apo diki akafamba zvakasiyana makore usiku chinyararire pakadzika kokudenga kupi mabhii fire- airatidza constellations- izvo zvakavanzika zvekusingaperi. Ini kutendera mhepo zvimba pamusoro rinopfungaira kudzora pamusoro pangu, kufamba akananga kunzvimbo yatakanga tisingazivi, rimwe gore guru yebhuruu munyanza, Mukomana nokuda bewitching Rwiyo mermaids kunditi.
Ndisingazive kwekuenda, ini ndakayangarara kunge buoy, ndakasimudzwa nedutu rezvishuwo. Ndakanzwa kubatwa nemafungu makuru akanditakura nekukurumidza nekukurumidza sekunge vaizondiendesa kune zvandinoda. Ndakatakurwa nemafashama, ndaive netarisiro uye ndakatsunga kunyangwe izvi zvikaitika zvisinganzwisisike zvakapa pfungwa yekutsvaga tsono mudura rehuswa. Mushure memwedzi ndisina kubudirira kuoneka, ndichiri kukwasva semupilgrim mungarava yake, ndakatanga kusahadzika uye kurasikirwa netariro chero ipi zvayo nezve mikana nemikana yekubata kuona kwechinhu ichi chakashuviwa nenyika asi zvakadaro zvakaoma kuwana. Saka ndakafunga kushandisa zvese zvandinazvo uye ndakatanga kushevedzera zvine mutsindo sezvandaigona: “Rudo uripi? "," Rudo zviratidze ".
Asi ndakava nemanzwiro ekuparidzira murenje sezvo chirevo chezwi rangu chakadzokera kwandiri sebhomangang. Kuwira pamabvi angu, ndakasimudzira maoko angu kumatenga, ndichikumbira Mwari kuti andibatsire. Dai bedzi matenga akanga azarurirwa, mugore reutsi, uyu mubatsiri akanga aburuka, iye oga aikwanisa kuunza chiedza mukutsva uku kurima. Muzvokwadi, ini ndakanga ndisingazivi kuti rudo rwaiva chii. Yaiva chinhu here? Yakanga iri mamiriro ezvinhu here? Kwakanga kuri kunzwa here? Zvose zvandaiziva kuti ndaive zvinovimba nerudo urwu uye kuti ndaifanira kuzviwana zvachose. Asi ndingagona sei kutarisa chimwe chinhu chandisingazivi?
Ini ndaingova nezano diki pane zvarinoreva, asi hapana chakajeka. Ndakangorangarira izvo zvandaigara ndichiudzwa kuti: "Rudo rune moyo murefu, ruzere nemutsa, runoda zvese, runotenda zvese, runotarisira zvese, runotsigira zvese uye haruori". Ndakaunganidza kune rimwe divi kuti kana Rudo uyu aisazofa, ndaive nemukana wekuuya padhuze, asi ini kuziva kuti Rudo haruna nguva kwakaita kuti ndicheme misodzi.
Ndakanga ndangobva ndakaziva kuti zvaizova muhupenyu hwangu uye kuti zvaizova zvakafanira kuzvitarisira. yakanga iri pedyo nesu.
Chitsauko 3: Mhirizhonga Inouraya
Mushure mechinguva chiduku ichi chokufungidzira chainditakura zvakakwana, ndakaenda pachikepe chechikepe changu, kuti ndinakidzwe neusiku husiku hwakanaka, uko kunatswa kwemhepo kwaipfeka machira echilika. Ndakanga ndiripo, ndichinyatsoona mhepo yakasviba mhepo, maoko angu akayambuka uye chiso changu nemwedzi. Pakuzorora kwechikepe, ndakagadzira rurefu rurefu rwemhutu rwakapararira kudarika. Izvi chitsinga akadzikama Pakarepo chikatsiviwa qui nyonganyonga iri showing pakati gusts kwemhepo uye kwokuputsika mafungu pamusoro Hull yangu chikepe annoncé pedyo ane hasha dutu.
Asingakwanisi kurwisana nemhepo yemhepo, machira emakumbo acho akaomeswa uye akaomeswa zvakanyanya zvokuti vakabereka zvakashata kubva pakatsvaga kwemuti. Ndakadzoka ndakanyarara mukati meimba yangu kuti ndione kuti pane dashboard nhare yeanemometer yakanga iri kunetseka. Ndakanga ndisinganzwisisi izvozvo, asi ndakanzwisisa kuti maitiro angu akanga asina tariro. Inguva yekuparadza nguva yekuedza kuchengetedza nhungamiro: chikepe chacho chinotenderera kumativi ese, chakarohwa nemvura yakashata. Dzimwe nguva Chimiro chinorangarira hukuru hwahwo kuvanhu uye chinova chisina maturo.
Asi ini, mutsvaki asingatyi, ndaisakwanisa kutsungirira kuti ndigadziriswe negungwa "rinopenga". Saka, ndakabatidza pombi yangu, ndikatwasanudza kapu yangu uye, ndakatsika ndakatsiga mukati mekamuri.
Hazvina kumboita kuti ndive nemagumo emhino dzangu panze, iyo ine mhepo yechiso changu nechisimba chakadaro zvokuti magirazi angu akaputika. Ndakaedza kuvabata asi ivo vakange vatofa mumvura yegungwa. Ndakatakura pombi yangu nehope yangu, ndakafambira mberi, ndakadzika pasi, ndichienda kune mast, uko yaibata, kwaibata. Ndakarwa zvakaoma kurwisana nemafungu aya asina kukodzera uye izvi zvidzvinyiriri zvechisimba zvemhepo zvakarova rutivi rwemhepo rwechikepe changu. Ndakanga ndakakurumidza kukundwa nechamupupuri ine simba yakanga yatumirwa, muhondo, iyo yose yezvombo zvayo.
Zvose zvakanga zvaitika zvakakurumidza. Makore akaungana mudenga rakasviba, saka, kamwe-kamwe dutu racho rakaputika. Mazimbe emagetsi emwenje anotungamirirwa nemakona ezuva.
Kudengenyeka kwegungwa rakasununguka rakaburutswa richibva mugungwa, iro rakaputsika uye rakapatsanurwa pachikanda chechikepe changu uye chiito. Kutinhira pamusoro pemafashamo emusango egungwa risingaregi, chikepe changu chakanga chisingatauri kuenda kumeso erutu.
Ndakanga ndakagadzirirwa gungwa rakatsamwa iro rakaumba mafungu emashanu kusvika matanhatu mamita, rakagadzirira kuputika muchikepe changu uye kuchimedza mumvura yaro. Mhepo yakatarisa yakaita segomba rakasviba yakanga yaswedera pedyo uye yakaswedera pedyo nemhepo inopera. Ziso rekudutu rakatarisana zvisingaiti. Nenguva isipi, ndakange ndadyiwa mukati uye ndakabatanidzwa mune rimwe remakumbo.
Pakupedzisira ndakarasikirwa nehondo isina kukodzera uye ndakawira pasi pegungwa nechikepe changu chakakwira zviuru zvemakungwa pasi pegungwa. Asi chii chakaitika kwandiri?
Chitsauko 4: Tine chinyorwa chisingazivikanwi
Ndaive ndakarara pamhenderekedzo yejecha, kutarisa mhuka dzakawanda dzakawanda dzakabatwa pakati pematombo uye bhanhire rakasununguka reofidian dzakasiyana-siyana dzakandibatsira.
Zvadaro, I vakagarapo, kuyemura azure denga chena dzaipenya pamusoro qui Chinenge limpid tatamuka mvura apo mafungu akachimedura uye akafukidza tsoka dzangu furo uye magakanje tuduku chipo Zvaifadza swiftness Akurudzirwa pedyo wangu scaly nemakumbo. Vose vakandipoteredza, ndakaona kumakuva emhuka dzinopfurikidza dzakashongedza jecha rakagadzirwa nechepamusoro gungwa. Ndakanzwisisa zvakanyanya kuti vakanga vari jellyfishes uye kuti ndinofanira kudzivisa kusangana kana ndisina kuda kutambura kubva paganda rinopisa uye kurwisa.
Zvimwe zvaityisirwa nenzvimbo iyi yakaipa, ndakasarudza kubva panzvimbo ino nekukurumidza sezvinobvira. Ndeipi nzvimbo? Ndakanga ndisingazivi. Pakupedzisira, ndakanga ndisingazivi kuti ndaive kupi. Ndezvipi zvingava zvinotambudza kupfuura kuva oga, munzvimbo isingazivikanwi, kure nemamwe mararamiro, asina rubatsiro kana kutakura? Zvishoma nezvishoma, ndakatambanudza pamusoro pejecha, ndichibata mafundo angu kuitira kuti ndiongorore utano hwangu hwepanyama. Zvinoshamisa, ndakanga ndisina chinhu chakaputsika. Mitezo yangu yakanga yakasimba uye yakanyanya kuora. Izvi zvaiitika sei mushure mekunge chikepe ichocho chikaparara? Pashure penguva shomanana, ndakasimuka ndikatanga kufamba.
Ndakanga ndichiri kutsvaga maoasis umo mvura yakanga isingaomeswi, muviri wangu wakanyorova nokutuka uye miromo yangu yakaoma , Ndakatarisa uye ndakaona hozhenje isingashanduki. Miti yacho yakafanana nemafungu makuru uye gungwa igungwa rechisuru. Ndakatakurwa nemvura yakasviba uye mhepo inopisa uye yakaoma. Denga rakaratidzika semugove wedhaimondi ine zvikamu zvakasiyana-siyana zvakanyenyeka uye zvakaratidza maziso ezuva. Pamusoro pechinhu ichi chinopenya chakanakisa, dhikiri yakatarisa, nekutarisa, zvose pasi.
Muchikamu changu chekuona, ndaigona kuona, kuburikidza nemhepo yejecha, iyo yakawedzera zvikuru kuona kwangu, chimiro ... uye ini ndakafamba nenzira iyi. Mukufambira mberi kwangu, kuputika kwemhepo ine mhepo kunondirova nechisimba chakanyanyisa uye ini ndinofanira kudzivirira chiso changu nechidimbu chembatya. Zvose zvakatsvaira uye dzakapofumadzwa, ndakava nekurwadziwa kunokonzerwa nehuwandu hwejecha shoma rakaputika ganda rangu. Kupisa kwaiva kwakanyanya pamhenderekedzo iyi uye jira rakasununguka kubva pamakanda angu kuti ripinde kamwechete pane ganda rangu rakanyangarika. Ndakanga ndisina simba uye ndakanga ndisina mvura. Ndaifanira kupindira mukati mangu, simba rinodiwa kuti ndirambe ndiripo.
Nenguva isipi, ndakanzwa mumoyo mangu unopindira iyo yakandifambisa mumunda wetariro ndokundipa simba rokuramba ndichienderera mberi. Ndakakwira ndokubva ndadzika pasi pasi pamakungwa akaita sechikepe nekuputika kwechiremera. Zvishongo zvangu zvinogona kuongororwa nokuda kwehurombo hwangu uye handigoni kumirira kuti nditize kubva kune jecha riri pamatope eSahara. Kusina kukurumidza uye ushingi, ndakagumburwa uye ndakarasikirwa nekutambudzika kwandakawira, chiso changu chichirova pasi, chisingazivi.
Pane imwe nguva, ndakasvinudza meso angu zvishoma nezvishoma. Chiratidzo changu chakanga chisina kunaka. Ndakanyongedza maziso nesimba uye ndakaona ruvara rwemutsvuku rwakanyangarika rwakanyangarika pamucheto uye moyo wangu wakanga uchinetseka nemafashamo ekunyunguduka uye manzwiro.
Kufungidzirwa nemaonero akanaka kudaro, misodzi yangu yakawira pasi pamatama angu achiratidza rudo rwangu uye mufaro. Ndine shungu, ndakatanga kutamba kune zvakataridza sango padenga.
Chii chingaitika kwandiri mumamiriro ezvinhu akadaro? Ichitsuwa chacho chaivepo here? Mibvunzo yakawanda iyo yakanga isina kupindura kusvikira ndaenda kumagumo ezuva.
Chitsauko 5: Upenyu, jungle
Ndakamanikidzwa nokuda kuziva, ndakagadzira nzira yangu kumhepo yakasvibiswa. Yakanga iri dondo rakasvibira, rinotungamirirwa nemiti yemimita makumi matanhatu emvura, saka ichiita sezuva rinopisa mvura yakasvibira pasi pehuni inoputika nemapuranga nemasvoshe akavanzwa pasi pemashizha akafa mukuneta. Pasi pemiti yakareba iyi, mimwe miti, yakasimba uye ine mavara mashizha akaoma, yakanga ine mizinga uye miviri yakaoneka yakanamatira pasi pfuma iri musango. Pandakanga ndichidzika mukatikati musango, ndainzwa mimhanzi yemakakete uye shiri pane imwe kereke yakanakisisa.
Ndakatarisa kune denga, uye ndakanga ndisina nguva yakawanda kusati kwasviba saka ndakatora danho rokutora nzvimbo yakachengeteka kuti ndipedze usiku.
Asi zvinoita sei kuti uve wakachengeteka iwe uri woga, wakakomberedzwa nemakaka makuru, nyoka ine uturu uye dzimwe mhuka dzomusango?
Ndakatanga kutora mapazi kuti ndiite moto huni. Pandinenge ndiine purogiramu, ndaive ndichitsvaga mashizha nemasese apo ndaiona, ndakarara pasi, nyoka huru. Iyo inomuka muviri wayo wakareba zvishoma nezvishoma, yakanyorovesa nheyo yayo yakatsvuka uye maziso ayo anoverengwa zvakagadzirwa nekatsva / kupenya zviyero
Nenguva pfupi, ndakaikuya nehasha mumusoro netsvimbo yandakanga ndangotora uye mhuka dzakasvibirira dzakanyangarika mukati mehuta hwakareba. Pandakanga ndaunganidza huni hwakakwana, ndakasiya huni humwe huoma uye ndakakotama pasi kwekanguva kuti ndifunge. Chinhu chakareruka chakanga chaitwa. Iye zvino ndaifanira kupisa moto nemugwagwa weArchaic wemapuranga maviri. Mumwe aifanira kuiswa muvhu uye imwe yacho yakanga yakabatanidzwa mune tsanga rine mamwe mashizha akaoma. Mushure mekudziputira pamwe chete kune utsi kunze kwemashizha. Zvadaro, ndakabhururuka zvinyoronyoro pamakumbo okutanga uye murazvo wokutanga wakaonekwa.
Nokudaro ndakakwanisa kushanda mumoto wemoto uye kupisa zvishomanana, nekuda kweizvi maitiro emadzitateguru. Ndakatanga kushambidza zvishoma nekuti usiku hwaive hunyoro, saka, ndakasimuka kundotsvaka zvimwe zvokudya kuti ndinyarare nzara yangu. Ndakanga ndacherechedza panguva yandaifamba, kuti ivhu rakapararira nehowa dzemarudzi ose. Ndakatora zvimwe ndisingave nechinoratidzwa pakuvimbika kwavo. Ndakadya zvose.
Ndakanga ndangoshushikana nekudhanha kwezvipembenene, avo vakave vakwezva nekupandescence kwehuni moto uye vakandikomberedza vasina kuzorora.
Sat akayambuka, ndakatevera nekuyemura kubhenekera kwezvinhu zvinopisa zvemoto uye lamatombo here izvo zvakasvibisa usiku hwemaima nechiedza. Ndakanzwa kufara zvikuru kuteerera mutambo uyu wekufamba uye manzwi. Ndakanga ndatokanganwa nzvimbo yekutadza kwandaiva, nokuda kwekuratidzwa kwakanaka.
Nekudaro, ini ndakave zvakare, ndakatemwa kubva kune yangu yekunakidzwa mamiriro sezvo mhepo izere nemhute uye nedenga rine makore rakaputika kuita kuti mvura idire pamusoro pehuswa huni. Mukupenya ndaive ndakanyorova kubva kumusoro kusvika kuzvigunwe sekunge ndaive nemumwe munhu akandikandira mugomo wemvura. Ndakanga ndangobatwa ndiri mushower. Moto wangu wanga wadzima huni dzave kushaya basa. Ndakaora mwoyo, ndakatarisa kumatenga, ndichikumbira hutongi kuti vandibatsire pandakanzwa izwi richizevezera: "rara pasi uye usatya chinhu, kutanga iwe uchadedera asi ipapo pfungwa dzako nehupenyu hwako hwese zvichazadzwa nerufaro rwekunoshamisa" Ipapo, denga yakagadziriswa uye mvura yakamira. Asi moto uyo waive wakabhenekerwa nekuedza kukuru wanga wafa uye, zvino, ndakadedera nechando.
Ndireva pamubhedha wakanyarara, ndakashongedza, ndichiedza kurara zvisina maturo, sezvo mhepo yemwedzi pamatombo emibhizha emiti yakashaya pfungwa dzangu. Yakafadzwa nehuwandu hwekuvhunduka kwemakungu, kuputika kwemakatekiti, twitter yeparrots uye kunakidza kwemeshe, ndakanga ndisina hope usiku. Ndakanga ndichitinhira, vhudzi rangu rakamira pamagumo aro, mwoyo wangu wakanga wanyongedza uye ndaifunga kuti mhuka dzose dzinoparadza.
Zvose zvakandikomberedza, murima, maziso akajeka enyika, kwandakaberekerwa uye ndinonzwa kupararira kwevanhu vakawanda vanopandukira rats madzimai. Kutya nechiitiko ichi chinopisa, ndaida kuchema ndichivhunduka asi pandakazarura muromo wangu, ndaisagona kutaura shoko. Ipapo ndakada kutiza asi maoko angu akanga akaoma rutivi nekutya.
Ndisingabatsiri, ndakatora matavi ehuni kumarudzi asingaverengeki uye zvisikwa zvandakanga ndava nechokwadi, asi zvombo zvangu zvakanga zvisingagoni kusvika kwavari. Ndakava agoraphobic yenyika iyo yakanga isipo zvechokwadi. Nenguva isipi, muviri wangu wose wakazununguswa nemapasimusi akaita kuti ndionekwe somumwe munhu ane chirwere chekufa. Pangangotanga kunetseka, zvakaoma kuti ndifemere. Ndakatanga kuvhiringidzika uye ndakanga ndakatsamwa zvokuti ndakaona sokuti ndainge ndava kuda kufa mukutambudzika kukuru. Ipapo kamwe-kamwe, chingwa chose chakanga chaenda, nokukurumidza sezvazvainge zvauya. Ndiri mumucheche, muviri wangu unodedera, uye watanga kufunga. Icho chaiva manzwiro anotyisa kukweverwa kusina chinhu uye hapana chimwe chinhu, kukwanisa kuita. Ndakanzwa ndisina simba uye ndisina simba.
Ndaneta, ndakanyongedzwa pamusoro pemuti, ndakarangarira zuva rinorwadza rohuduku hwangu, mumaruwa, muimba yevabereki vangu. Chimwe chinhu chisingakanganwiki ...
Chitsauko 6: Kuyeuka
Ndakanga ndaenda famba kwete kure neimba, uye ini strolled kuburikidza guru pamusoro nharaunda uswa hwakakanyiwa Nyatsobatanidzwai kupi maruva siyana dzakadai voikukkien, clovers, petunias, Kufema ari zvemiti inonhuhwirira mhepo qui vatora kunhuwirira kwemaruva kwazvo ava.
Ndichicherekedza mugero kumashure kwangu, ndakaona kuti maruva akange akakotama pandanga ndichipfuura neapo sekunge aindikwazisa uye kuti mhashu, madzvinyu uye zvimwe zvipembenene zvinotambanudza mapapiro avo ndokubhururuka kuenda mudenga kunge mafireworks ane mbiri. Ini ndaive pasina kupupura chiitiko chinoshamisa. Ndatorwa neichi chidimbu chakanaka, ndakashevedzera kuti: »Hupenyu, ndinokuda! "
Pamusoro peiyo girasi yakasvibira zuva rakapenya zvakasimba, mahara aro akafukidzwa nemakore makuru emvura.
Nenguva isipi chisimba chine chiedza chekuvhenekera, chakateverwa nekanzwi rekutinhira kwekutinhira, chakakanganisa rugare rwakabata ushe mudenga uye mvura yakawanda yakawira pamagwiridzi akazununguswa nechisimba. Ndakasarudza kudzivisa mvura.
Ndichimira ndakadzika pasi pemuti, ndakatarisa kumusoro kwemuti, uko mavara mashizha, akatamba nemhepo mumhepo apo mashizha akafa akawira mumatavi awo mune gungwa rakanyarara. Sezvo ini ndakamirira kuti mvura inonaya imire, ndakatarisa madonhwe makuru emvura ayo aine mumwe pachigadziko chemashizha. (Lanceolée) ??? Ndakanamatira pamusoro peti rakasimba, ndakayemura uye ndakateerera kune matatya akawanda pamhenderekedzo yegungwa, anotenda mudenga nokuda kwezvipembenene zvakawanda zvakawira mumuromo wavo.
Mvura yakadira zvakanyanya parwizi rwakatyisidzira kusiya mabhanga aro. Pakarepo, ndakaziva kuti ndaive munjodzi nekuti ndakange ndamboudzwa kuti zvaive nenjodzi kugara pasi pemuti panguva yemhepo ndokutanga kumhanya nekukasira sezvandaigona kuburikidza nouswa hurefu ndakananga kurwizi. Ndakasvika pairi zvachose nekufema uye ndakagara pamahombekombe kuitira kurangarira mweya yangu. Zvakaoma kuti ndange ndabata ivhu rakanyorova uye rine matope rebhangi, kuti mwenje wemwenje une simba wakarira mudenga, uchirovera pasi muti wandakanga ndangoshandisa semubhedha. “Ko dai ndakaramba ndiri munzvimbo ino zvishoma? Ndaifunga. Ndaka dedera uye mazino angu akadonha kwete nekuti ndakange ndanyura mukati asi nekuti ndanga ndave padhuze nekufa ... Ndakakomberedzwa ndiri mudumbu, ndakatarisa kumusoro, madhadha achipwanyika pakati petsanga uye maruva emvura ebhuruu. (Les nénuphars st blanc non ??) Yakashinga hono hono, yakatanga kutsanangura madenderedzwa mahombe mudenga ndokumhara pamusoro pemvura padhuze neechikadzi, ichizunza mazaya ayo machena machena. Iyi show yakandizadza nekushamisika.
Mvura inoramba ichingova pamunda, asi ini ndakanga ndisingazvizivi. Ndakagara, ndakabata musoro wangu nemaoko angu uye ndakashamiswa nehove iyo yakashambira pakati pegungwa uye ine mavara machena. Zvadaro ndakanyura ruoko rwangu mumvura yakachena, ndakaedza kubata rimwe. Kushevedzera, ndakabvisa ruoko rwangu kubva kumvura ndokuzarura, asi rwaive nemadhaka chete. Kunyange zvakadaro yakanga izere nehupenyu: minye, grubs, leeches, shellfish nemamwe mhuka dzakawanda dzaivanda munzvimbo iyi mukugadzirisa. Ndakashamisika ndakabvisa tsvina iyi pamahombekombe. Ipapo ndakatsamira kushambidza maoko angu pandakazobuda mubhangi ndokuzviwana mumvura. Ikoko, ndakadanidzira nenzwi guru sezvo ndaigona nokuti ndaisagona kushambira.
Ndaifunga kuti ndaizoenda kundonaya apo ndainzwa kubata kwechikafu. Zvisingatarisirwi, mumwe munhu akandirasa kubva kumakumbo erufu. Baba vangu vakanga vangoponesa ini.
Kuyeuka kwechiitiko ichi chehupenyu hwangu kwakazadza mwoyo wangu neruzivo. Ndakasuwa nguva idzi, nguva dzomufaro, kuseka, asiwo zvekumanikidzwa uye, akarasikirwa muhupenyu hwehuduku, ndakarara.
Chitsauko 7: mune Harmony neChipo
Mangwanani akatevera, ndakasimuka pamwe nemakorasi emusango aiva nekodokiti mukukudzwa kwangu. Yakakanganiswa pamuti, mhirizhonga ine murara-semapuranga yakatanga cacophony apo shiri dzakanaka dzaikurira pamusoro pemusoro wangu. Rhythmically, dzimwe chimpanzees nimble dzakasvetuka kubva kune rimwe bazi kuenda kune rimwe. Ngarave mbongoro nedzimwe mhando dzembongoro dzakanga dzakaturika pamiti, dzichikwira kumusoro, dzichiita zviso uye dzichikarira pamberi pangu.
Ndakasimuka, ndakatambanudza kuti ndisunungure muviri wangu wakaoma uye ndakasarudza kufamba musango ndichitsvaga zvitsva zvitsva.
Ini Akafamba pamusoro nyorova pasi zvinofamba zvakawanda pamwe woodlice, weevils, slugs nezvipembenene yamarudzi ose, ndakaona pamberi pangu, mumwe ramarara ngoko akanga akaita bhora kuna ndove uye Vaiumburuka nayo kunotyisa dendere pamwe kunotyisa Papera legacies akafanana an acrobat. Kwakanga kunewo muti muduku wakanga uchitya zvokuti unogona kuonekwa mumamiriro emuti.
Uyezve, ndakaparidzira chinotinhira bhote re butterflies uye shiri-nhunzi-shiri, dzakasvetuka pamusoro pemaruva, dzichikwezva nekupenya kwavo. Zvadaro, ndakanga ndashushikana nekutinhira kweguruvhiri kuruboshwe pamaruva eucalyptus, izvo zvakaratidza mapapiro emucheka webhuruu unopinda nguva dzose.
Zvishoma nezvishoma, lepidopteron uyu mokusvinwa, pamwe kunotyisa protractile proboscis, dakunanzva kuti yakanaka ruva Pandakaona, dissimulated ari tangled dzakanzi munhu shrub, uchichinja simbe vachidzungaira.
Mudzidzisi wekukomba, iyo yemeleon yakave yakagadzirisa nyama yakakosha kuburikidza nekukwanisa kwake kuchinja mararamiro uye kugadzirisa kune imwe nzvimbo. Ndakaramba kurega izvi zvichiitika pamberi pemaziso angu uye chiso changu chakatarisana nehotera, zvichiita kuti kufamba kukuru mumhepo kutyisidzire. Hurufuru yakamhanya. Ndaizvikudza pamusoro pangu.
Ndiri kurira nomufaro, ndinofamba mumamiriro ezvinhu anofadza, apo, ndakaona chitubu chemukati chinopenya uye chesirivha chakanga chichichera muvhu kuti chiise mazai ayo.
Chigoni chinopenya chakanga chichitsvaira webhu uye chikafu, chakanaka, chinopindirana, chakajeka uye chisina kuchena cobwebhu chena. Ndakafamba-famba zvakanyatsotarisa kuitira kuti ndirege kuzviita.
Sezvandaifamba ndakadzika musango rine michero yakasiyana-siyana, ndakanga ndichitambura nazvo nokuti ndakanga ndatambura nemigumisiro ye hallucinogenic mushroom usiku hwakatangira. Usiku ihwohwo, ndakanga ndatambura nekutya uye ini ndakanga ndisingadi izvozvo zvakare.
Pandakanga ndadya zvakaguta, ndakafunga kutsvaga nzvimbo yandaigona kuzodzivirirwa kubva kunhamo dzese idzi. Makiriketi anga achangotanga "rwiyo rwekunyura kwezuva" sekunge achindinyevera nezvehusiku ihwohwo hwave pedyo uye ndakafamba nekukurumidza. Pakarepo, nhanho shomanana kubva, ndakaona gomba padombo, raitaridzika semusuwo webako.
Ndakagara kwechinguva pamberi pekuvhurwa kwebako uye ndichisimudza maziso angu kudenga ndakashevedzera kuti: “Maita henyu Mwari wangu! “Ipapo, ndakarohwa nemweya wekufema, ndakawira pamabvi angu ndokutanga kunamata, ndakatarisa mudenga makazara nyeredzi dzinopenya. Ndakanga ndangoona kuti Mwari havana kumbokanda mapfumo pasi pandiri uye kuti vaive vachiri kunditarisira. Sei ndakakahadzika Rudo rwaMwari nepo ndaive nekutenda kwakanyanya?
Panguva ino, maziso angu ngaaite maparera e lachrymal akabuda pamatama angu asina kumira. Zvino, ndichibvisa maziso angu necheshure kworuoko rwangu, ndakasimuka ndikapinda mukati mumhava ...
Chitsauko 8: Kushungurudzika Kuzvarwa
Pandakapinda mumumvuri werima mubako, gore remabhati rakabuda mubako kuti riparadze murima. Ndakaneta nezuva rakaoma ndangoenda, ndakagara pamadziro evha uye ndikavata nehomanana mashomanana mushure mokunge, nevanopinda.
Zuva rakatevera pandakazarura maziso angu, ndakanzwa kurwadziwa kwekuputika kwechirwere chakaitwa nebhiza rakanga rabaya ganda rangu usiku. Ndakakwanisa kuwana chimedu chehuni kuchiedza chaipenya kuburikidza (kuzarura kwebavha) uye chakasimuka zvakashata uye chakanga chichifamba chisingasviki kubazi ini ndaizoshandisa chiedza changu mukufambira mberi kwangu pasi pevhu. Ndakaiverenga ndokutanga rwendo rwangu rurefu mumvura yakadzika yepasi. Chiedza chandakaisa muruoko rwangu chichivhenekera murima risingaperi. Ndakanga ndichifamba mumhepo yakamanikana uye ichivhuvhuta pasi. Nguva nenguva, ndakamira nguva shomanana kuti ndibate mweya wangu, ipapo ndakaramba ndichidzika mukati meganda. Mukuwa uku kuGehena, ndainzwa kunzwa kutonhora mumuviri wangu uye mapapu angu uye vanyori vakaita semaruva anofa. Munguva pfupi, kufema kwangu kwakava nyanzvi. Mhepo, yakaremera uye inodzvinyirira mumugwagwa, yakatyisidzidzira kubvisa moto wakavhiringidza uye wakarasika. Ndakanga ndiri murima, apo pakupedzisira, mushure mokufamba kwenguva yakareba mumakumbo eiri pasi pevhu ndakaona nzvimbo huru iri pamberi pemaziso angu.
Muchizvaro chevhu mamwe mazhenje emadzimai e stalagmites uye stalactites akanga aumba girabhu guru uye ndaitarisa sechinhu chisingabatsiri mairi. Kuti ndibve mugomba iri, ndinoramba ndiri pedyo nemadziro ehavha rinondiratidza zvakavanzika zvenguva yekare. Pamadziro aya, ndakashamiswa nemapako emifananidzo emisidhari yekuvhima nekuvhima. Iyi parietal art, yakavezwa pamatombo ehavha
Ndinozvifungidzira ini, ndakabata pfuti, inotarisana nemasodhoni emasviki anopfuura mashanu uye ndinofanira kurarama nemamiriro ekunze asingazivikanwi akaipa nemafungiro akare.
Sezvo ini APPROBATION ndichifunga Australopithecus, ndainzwa kurwadziwa rufu kunonoka pamwe muviri wangu mutete, Kuwedzera cardiac pulsation rangu uye yakandipa makaitika kunzwa kuti kubuda nesimba, kuburikidza kuboora matete ganda nokunyanyisa kurova kwomwoyo wangu. Ndakabata, ndakabata chifuva changu chekuruboshwe uye ndakatya kurwadziwa kwemwoyo pandakaona, ndichidonha pasi. Nenguva isipi, ndakanga ndine pfungwa yakajeka yokutevera iyo inotungamira Ariane akaita uye ndakazvikwata pamwechete pamwe nekukurumidza. Nditevera nzira yemvura yakasviba, ndakasvika pane imwe nzvimbo apo mvura yepasi yakanga yava yechokwadi ye crucible. Ikoko, stalactite yakawanda inotyisidzirwa kuwira pasi, semunondo weDamocles. Ndaifanira kuita chisarudzo. Ndakafunga nguva shomanana uye pakupedzisira, ndakawana kukurudzirwa kukuru kuti ndizvipinde mumvura yakachena yegungwa.
Ini ndakashambira ndichiedza kudzivisa matombo achibata kufema kwangu kweminiti pandakaona chiedza chichipenya mumvura mamiriyoni mashoma kupfuura ini. Ndakakurumidza kukurumidza kuenda kunze, ndichidanidzira nekununurwa.
Ndakadzingwa kubva mumakumbo evhu, ndakagara pabhangi kuti ndifemere zvakanaka, pakarepo, ndakanzwa chimwe chinhu shure kwangu. Ndakatendeuka pakarepo munguva kuti ndione mutema werima semhepo inoputika pamusoro pangu.
Dzimwe maoko akasimba akandipindira, uye ndakanga ndanyanya zvokuti ndakarasikirwa.
Chitsauko 9 Chibayiro Chaicho
Pandakadzokazve maziso angu, ndakaona kushamisika kusingaoneki mberi kwangu. Ndakanga ndisati ndamboona vanhu ava muupenyu hwangu kare. Vakanga vari tsvina yakaipisisa, zvisingafukidzi kuputika nemakumbo. Vhudzi ravo risina kuchena rakawira pameso avo uye maziso avo akaputika nehasha.
Muvhidzi ane unyanzvi akamira pamberi pomoto mukuru, achitarisa ane utsinye. Akange akapfeka zvishongo zvake zvemashiripiti: mhete yakaitwa nemapfupa kubva padhehenya, apronji yemifananidzo yakavezwa yakavezwa uye mapfupa evanhu, mashiriki emashiripiti akachengetwa pabhanhire. Akanditarisa nemeso ekutsvaira sokunge kuti azondiuraya uye moyo wangu wakanga uchitya nekutya.
Achiuya nenzira yangu, akanga ari droning nezwi rakadzika, uye akazvinyengera. Akateverwa nemutungamiri uye magus, avo vaiva nesimba guru remashiripiti, vaiita sevari kutaura nemweya uye ini ndakanzwisisa kuti nguva yangu yakazorora pane zvakaguma zvekukurukurirana nemasimba. Mhepo yakaungudza uye yakadanidzira sokunge madhimoni akakumbira chibayiro changu kuti aderedze kutsamwa kwavo. Chiso changu chakashanduka chikafu pandakaona mukombe wakareba pamoto wakatsva. Ko vanhu ava vanogona kuzvidzora vachida kundipa kudya kwemanheru here? Wadhidhiya akabvisa banga rake remashiripiti uye akacheka maoko angu.
Kubva pakudengenyeka, magus akaunganidza zvishoma zveropa raakanonoka kunwa kubva mundiro. Nenguva isipi, wizard yakanga yakagadzikana uye yakatanga kusvika kumativi ose uye inofadza zvikuru uye nokukurumidza ikawira pasi, yakarova. Akanga akamira ipapo munzvimbo iyi kwechinguva, ipapo zvishoma nezvishoma akasimudza musoro wake ndokuisa maziso ake kwandiri. Akanyatsokumbira mumwe munhu kuti auye nehuku. Akachera pahuro yeiyo huru yakachena chicken ndokuparadzira ropa rake muguruva guruva remusasa. Vamwari vakagamuchira izvi zvakasunungurwa sechipo chezvinhu zvakanaka ndaigona kuona kusemwerera pameso echiso. Akauya kuzondiona zvekare uye akarayira zvakasununguka kusunungurwa kwangu, iyo yakakurumidza kuitwa nevatsigiri vaviri. Ndakasunungurwa kubva kumiganhu yangu, ndichibatwa nekushandisa rudzi rwemajoni akaoma pamusoro payo, saka ndakanzi iunganidze moto pamwe chete nedzimwe rudzi apo mhemberero yechitendero ichaguma. Asati apedza kubika nyama muhari, Shaman yakabvisa matumbo ehuku uye zvakare yakaita tsika yemashiripiti. Panguva yemitambo, hapana munhu akatenderwa kutaura kunze kwemashoko makuru, avo vaizove vaine tsitsi nekuda kwekumhura kwavo uye vaizobayirwa mukurangwa. Nenzira iyi izvi hazvina kuitika. Sezvo ndaive nehanya neni, tsika yakaramba ichienderera mberi: Ndaifara kudya iyi nyuchi pane kuva mumwe wevanhu uye kufara nayo. Panoperera mhemberero, ndakaendeswa mukamba uye ndoga usiku, ini anzwe bhendesera mashoko, kuseka uye palaver zvizvarwa chinangwa handina Nzwisisa Zvavakataura. Kurota, ndaifunga kuti vaishamisika kuti ndakabva kupi, nei ndaitarisa zvakasiyana uye zvavaizoita pamusoro pangu mumazuva anotevera. Kushungurudzika kwehope dzangu, ndakazvibvunza kuti chii chaizoitika kwandiri.
Ndingada kuona mhuri yangu zvakare here? Ndingazodzokera kune imwe nyika yakasimudzirwa Ndeupi weavo vandaida nokuda kwenzvimbo isingazivikanwi?
Ndakanga ndawana chitsuwa ichi chekudenga kwandingave ndakasununguka kubva mumaketani emagariro nevamwe vanhu.
Izvi zvinopa kupa pakutanga kuona maitiro ekurarama muhurongwa hwekare pasina chero mutemo, asi ndakanga ndangobvuma kugamuchira mitemo yepamusoro uye maitiro emadzinza uye pangozi yokusunungura rusununguko rwangu uye rusununguko rwangu.
Chitsauko 10: nhanho inosangana
Pakuvhenekera kokutanga kwemambakwedza zuva rakaputika mamiriro ekudzivirira kwawo. A decoction yakashata yakashandiswa pamaronda angu uye ndakapiwa chirongwa chemishonga yemishonga nemidzi. Zvino mumwe mukadzi akanaka kwazvo ane minwe yemashiripiti
muviri wangu wakaremara zvakanyatsonaka uye unyoro. Ndakanga ndakaputirwa nemashizha anonzi homeopathic akabatanidzwa neine liana duku, saamai. Ndakanga ndakanga ndivete pamubhedha wangu mushure mevhiki uye zuva rega rega, panguva imwe chete, ndaigona kuona chimiro chechimiro chakanaka chizvarwa chakatsanangurwa pamusoro pechiedza pamberi pesuo uye ndokupinda mukati meimba. Pakarepo pandakaona mumvuri wake, mweya wangu wose wakanga uzere nekunakidzwa kusingaperi.
Ndakafarirwa nemukadzi uyu ane chitarisiko chesango, aive akanaka zvisingaite. Chinhu chinoyevedza nezvake chakamutsa pfungwa dzangu dzese pandakamutarisa. Neganda rake remuorivhi, maziso ake ehazel, bvudzi rake dema dema uye kunyemwerera kwake kunopenya, aive akanaka zvekuti ndakafunga kumupa zita rekuti "Houri".
Uyu mwarikadzi aigara achiita tsika imwechete: achifugama pedyo newaini yemashizha, akasimudza zvishoma nezvishoma musoro wangu kuti andipe zvinyorwa zvisinganzwisisiki zvakagadzirwa nemafuta anonhuwira uye midzi, ipapo akashandura zvinyorwa zvangu zvine hanya. Apo maziso ake anoisa mafivha angu pameso ake, the caress of the air.
Akanditarisira sezvandakanga ndiri hama uye akaratidza kusununguka kwakanaka nokugara pamubhedha wangu uye achichengetedza kambani. Ndakanga ndisingamuzivi iye zvino ndakashamiswa nerudo rwaakandipa uye ini ndakamirira nguva idzi dzekutarisira nekusashivirira kwakazadzwa nechishuwo.
Ndakatanga kunakidzwa ne convalescence yangu uye ndinoshuva kuti haizomboperi. Nokuti, chii chaizoitika kwandiri zvakare?
Chitsauko 11: Initiation
Ndainzwa zviri nani uye maronda angu akanga aita zvinyangarika, achingosiya zvitsva zvishoma. Rimwe zuva ndakatarisira kushanyirwa kwaHouri wangu, ndakaona nokuora mwoyo kukuru Shaman inopinda mumba. Akatambanudza ruvara rwake, akaswedera pedyo neni ndokukandira majoka emhou nemapfupa pasi akavhara mazwi eupenzi.
Mupenzi akabvunza vakafa uye, kwenguva yechipiri, akabvunza madzitateguru kuti amubatsire kutora chisarudzo. Kuratidza pajecha risinganzwisisiki pakati pezviratidzo uye zviratidzo zvekufananidzira, akacherechedza zvinetso zvandaifanira kupfuura kuitira kuti ndiwane kodzero yekuve chikamu cherudzi.
Mutevedzeri unotsanangurwa zvakajeka nemasimba ezvisikwa anotarisirwa. Ndaifanira kubudirira nekubhururuka mavara, izvo zvaizoita kuti ndikwanise kupinda muchikwata chakavharidzirwa chevanotanga. Iyi denderedzwa yakachengetwa chete kuvanhu. Iri sumo kuhupenyu rinomirira ndima kubva paudiki kusvika pakuva munhu mukuru, apo munhu anozviisa pasi uye akazvimirira. Varume chete ndivo vane kodzero yokusununguka, vakadzi vachiri kuvimba nemurume wavo zvenyama uye mupfungwa.
Muchiedzwa chekutanga, ndaifanira kunge ndiri mukutya kwekutya uye marudzi ose ekutya uye psychosis, iyo yaiva munhu akatarisana neusuru uye kushungurudzika kunogona kunzwa. Ndaive kudzokera kudondo iri rakanaka uye ndinopedza mazuva matatu ipapo. Chiyero chechipiri ndechimwe chekuongorora kwakakosha kwemhuri kuitira kuti ndiongorore ushingi hwangu hwepanyama uye maitiro angu. Muchiedzwa chechitatu uye chekupedzisira, ndakakwanisa kushanda nemaoko angu mubasa rehuni, kuitira kuti ndiongorore mazano angu, unyanzvi hwekugadzira uye kusunungura simba rangu rokusika.
Hapana munhu aibvumirwa kupinda mukutanga kwangu kana kuti kundibatsira nenzira ipi zvayo. Kunze kwekuti, ndakanga ndisingadi rubatsiro nekuda kwematambudziko ehupenyu hwakandibatsira, munguva yakapfuura, kutarisana nemamiriro ezvinhu akafanana. Nokudaro ndakanga ndawana imwe nzvimbo yekutonga pamusoro pechiremera cheDALAI LAMA yakakurumbira uye ini ndakakunda miedzo iyi mitatu ine mbiri.
Pakazara mwedzi manheru, ndakagamuchira mazwi ekupedzisira muhukama hwemasango matsvene nekuda kwekutenda uku mumhepo yezvakasikwa uye kwairemekedzwa zvikuru miti yavakabata nekuremekedza. Mhemberero yaive musangano wevanotanga, yakarongedzwa nemakuru makuru. Musoro wangu waiveurwa uye ndaigara ndichigezwa mumuviri wangu. Mushure mezvo, wizard yakaramba ichinditaurira mazwi angu pandaipfekedza muviri wangu nechinhu chisingaitiki. The mhemberero yakapera kuburikidza hieratic chokunyengetera. mukuru to magus: musoro wangu hwakakungwa pamberi _him_, akaita ini pasi The Most zvikuru Kutarira, kupika kunyarara uye kuvimbika, Zvino vakandipa nedenga uye nomuseve chena, chiratidzo of phallus. Zvadaro, ndakarumbidzwa muzita rehama uye remangwana rinotanga.
Mangwanani-ngwanani, zuva rakatsvuka, rakabuda mugomba rayo uye kuonekwa kwebhora iri remoto kwakaratidza kumuka kwega ndoga pane imwe existential system. Ndakanga ndava chiremera kuva nhengo yedzinza uye ini ndakaberekwa patsva kutanga imwe hupenyu.
Chitsauko 12: Sacred Union
Zuva rakatevera, ndakaroorana naHouri, uyu enchantress, uyo aifanira kundinyorera nerudo munguva dzekushaya simba kwangu. Panguva yemutambo mukuru uyu mukukudza kwekukudzwa kwangu, ndakafara nekuratidzwa kwakanaka kwe nziyo uye kuvhiringidza dhani pamberi pangu.
Pakutanga kwemhemberero, vatambi vaitevera rwiyo rukuru rwe djembe, ndokubva vatamba zvakawanda. Vakadzi ava vari kufamba vakasununguka kuburikidza nekufamba muhudyu zvishoma nezvishoma, sekunge zvimwe zvirevo zvekudenga zvinogara zvichiratidzwa nemuviri wavo. Uyu orchestra wemafambiro uye simba zvakagadzirwa kuburikidza zvakakwana. Vakatamba mudenderedzwa, maoko akatambanudza, zvishoma sai dervishes vachibudisa simba rinoshamisa ravakakomberedza.
Pakunzwika kwematengerwo, vagari vomunharaunda vakarova maoko avo kuti vakurudzire vatambi vakafambisa muviri wavo kune tempo yemimhanzi ndokundipa mufananidzo wakanaka kwazvo. Iyi mitambo yaiva yemhando yezvakavanzika uye iyo yakakanda spell ndakaiona. Ndakashamiswa zvakakwana pandakanga ndakagara pedyo neni. Zvadaro, mimhanzi yakakurumidza uye yakakurumidza uye yakatora nguva yakareba. Nenguva isipi, apo mimhanzi yakanga iri pakakwirira, mhirizhonga yakamira uye munhu wose akagara.
Zvadaro, ndakadzokera kuchigaro changu chichiteverwa nemufaro mukuru uye kukwazisa kubva kumativi ose. Ikoko kwakanga kusina mubvunzo kuti paiva nehupenyu hwekudyidzana uye hukama hwandakanga ndisingawanzozvinzwa kare. Mweya wangu wose wakarumbidzwa ne-swirl weRudo uye mufaro uye ndakangosuwa kunze kwekuda kweiyo mhemberero.
Gare gare, pamberi pekunaka kwakatsvuka kwezuva rakatsvuka, takaungana pamwe nemoto wakazara, takafara kudya chikafu uye takateerera kumusoro wemusha wekutaura nhau dzenhema uye nhema. Saka pamagumo emanheru akanaka, Houri neni takabatana zvakasimba muupenyu.
Chitsauko 13: Kutenda Kunobatsira
Ndakanga ndave ndakatonyanya kurohwa nemadzinza emarudzi aya aive nawo. Zvechokwadi, chikwata ichi chakanga chisinganzwisisiki chekuzvikudza nemhemberero dzaro dzemashiripiti. Mharuro Varume, kuroorana uye kuchema kwakaita kuti mutsika mhemberero: rekukwazisa nhengo yorudzi zvapfuura, kunofanira kuyeukwa mhemberero Rakarongwa Munguva qui vanhu vakatanga nokurira rakati richirira nokurira kwazvo kuburikidza usiku Ipapo Anzwirwe zvishoma nezvishoma pamwe ya pamariro . Vakashatiswa, vamwe vakadzi vakaratidza kutambudzika kwavo nokuzvikanda pajecha uye vachidanidzira nenhepfenyuro. Vamwe vavo vakarova muviri wavo kana kuzvirova, kuchema nekurumbidza kune imwe nguva.
Pakarepo mushure mekufa, boka revakatanga raifanira kutarisira mutumbi wemunhu akafa nehanya nemweya.
Vakagadzira muviri wevhu tsvuku yakavhenganiswa nemafuta, saka vakanga vari kunze kwemasango. Mushure mekunge, vakaviga muviri nemuipi wega nekuda kwekuti vaidavira kuti muviri waiva nehupenyu husingafi uye hwakaramba huchiita basa. Kutenda mumashiripiti kwave kwakadzika midzi zvokuti, apo nhengo yedzinza akarwara, haana kutaura kuti chirwere chake kushayikwa kwehutano asi panzvimbo yekutsamwa kweumwe wevanamwari vakawanda ainge atogumbura.
Akaedza, nekurwadziwa, kuyeuka kana akanga asina kutyora Kuzvipira kana involuntarily imwe mitemo vazhinji kunorambidzwa uye Dai kureurura pamberi guru Shaman Aiva Ndiani chete rakavimbika kuvasunungura _him_, akavonga à mwanakomana remweya masimba. Saka mukuru Shaman ari pano kuti agare, zvakavanzika zvemuitiro uye akanzwa kusada kugovana navo. Tinoonga nekuda kwekuita uku, tsika nemadzitateguru ezvitendero zvevanhu vemunharaunda idzi zvakaparadzirwa kubva kune rimwe chizvarwa kusvika kune rimwe chizvarwa kusvika nhasi.
Chitsauko 14: Tribal System
Ndakanyanya kufadzwa nezvokuti rudzi urwu rwakarongeka sei nehurongwa hwehutungamiri hwehurumende nehutano. Vaiva nebasa rekuzadzikisa mhuri uye pavakapedza basa ravo revanhu, vaifanira kutakura zvido zvekunamata.
Mabasa akagoverwa maererano nechinzvimbo chomunhu mukati memadzinza: vakadzi nevana kune rumwe rutivi, varume kune rumwe rutivi. Mambakwedza, vakadzi vakageza machira avo, vachibereka mvura, vachiimba panguva imwechete kuti vakurudzirane.
Mukati mezuva, takaenda tichivhima, pamwe nembwa dzedu Boubou naTito, izvo zvakatibatsira kutora mutambo. Pamberi pedu, tiri mumatambudziko ezvinhu zvatakange tava nehanya zvikuru. Kwete chete isu taifanira kutarisa nzira yekugunzanidza kuwirirana mumasikirwo akaita semakeloni chaiwo, asi taifanirawo kuratidza kusakisa kukuru kuitira kuti tisafurwe nemhondi panguva yakakodzera. Pashure pezuva rakaoma rokuvhima, patakadzokera kumusasa nemutambo, madzimai edu avo vakanga vakamirira kutsungirira kushungurudzika vakatikanda mumaoko avo, vakakunda nemufaro. Zvishoma nezvishoma, vana vaitarisawo kudzoka kwedu, vakagadzira jecha.
Vakasvetuka nemufaro uye takazodzokera kumazita edu. Zvadaro vakadzi vacho vakavhunduka vachipotera mukubika muhombodo huru tsvuku yetikiti. Izvi zvakagadziriswa zvakashandiswa pakugadzirwa kwemutambo. Ndainakidzwa nehutano hwemadzimai evakadzi ava vakashandisa maruva akawanda anonhuhwirira ekugadzirira kwekudya. Ndaifarira gastronomy iyi yakashata yakanga yakasiyana nezvandakanga ndinazvo munyika uye zvandaida kuita munguva yemberi, kuitira kusimbisa zvisungo zvehama mukati mezinza. Mushure mekudya kwemanheru, takasimuka, Houri neni, kuti tipedze maawa akawanda tichishambidza pasi pemvura zhinji yerwizi.
Zvadaro, takapinda muhukama hwemasango mashizha nebhangi, kubva kune rumwe rutivi rwenyika iyo yakaticherechedza isu tichizvidza asiwo yaifunga ukama hwedu nekunakidzwa. Zvino, shure kwehusiku humwe, patakanzwa mangwanani, takange tichidanana. Naiye, zvakaitika kare hazvina kumbovapo zvakare, ramangwana rakanga risina basa uye nguva yemazuva ano yakakosha. Ndingadai ndakapa chimwe chinhu kuchengetedza nguva idzi dzisingaperi uye rudo urwu rwakasimba. ZVISINEI, rimwe zuva, kana vose vadzoka kumusha uye zuva akanyangarika panguva mujengachenga, ini ndichizviona, ndoga pamhenderekedzo, asi zvimba qui yakadonha Against pamhenderekedzo uye masa nokuripisa furo uye Ndaishamwaridzana Akakurirwa With Rwizi zvomunguva yakapfuura .
Chitsauko 15: Spleen
Ndakanga ndisingatauri ndakarara pasi pajecha uye ndakanga ndichinyatsoona nzvimbo yakatarisa iyo, yakasvibiswa nemagumo ekupedzisira ekuvira kwezuva, yakatora chikamu che-yellow-orange.
Kunyange zvazvo iyi nzvimbo yakanaka kwazvo yakazopera
pamberi peguta rangu rakazadzwa nemaziso anoshamisika, ndakateerera rwiyo rwemagungwa
izvo, sezvibvumirano, zvinonzwika kundishevedza uye kunditaurira kuti ndiuye, uye ndinonzwa kubuda kwemafungu akabuda pakarepo pamatombo akaoma. Kusanganiswa kwemashoko aya anokonzerwa nemimhanzi inotapira, iyo inondifadza uye, nekuvhara zvishoma zvishoma maziso angu, ndakanyemwerera ndichifara. Iye zvino azere neruzivo, ndaifunga kuti ndakanga ndasara ndisina mashoko uye ndakazoziva kusingaperi kwechimiro chekureva umbilical, chakandibatanidza neni kumidzi yangu.
Ndakazviita kure kure nevabereki vangu ndaivada. Iye zvino ndaigona kunzwa manzwiro aaiita muupenyu hwangu. Ndainzwa kuti hupenyu hwakanga husiri kukosha kwahwo pasina munyu weRudo uye kupisa kwemashoko. Ndinoda kutaura, kukurukura nemumwe munhu uye kuvhura mwoyo wangu Asi pano, ndaive nemafungiro okuva ndoga munyika yose. Pakarepo, ndiani ainetseka nezvekusuruvara kwangu, uyo ainetseka nezvekusipo kwangu, akauya kuzonditsvaka. Akandibata noruoko uye takadzokera kumisasa.
Ndinoda kudzokera kunyika yangu yekuzvarwa. Anofanira kunge akaverenga pfungwa dzangu. Akaonekwa serene uye akadzikama asi ndakanzwa urombo kuti mwoyo wake wakaputsika. Haana kuveura misodzi achiziva kuti zvaizoitika zuva rimwe chete, akazvigadzirira mupfungwa kuitira kuti aparadzanise. Akandiudza kuti akanga akagadzirira kutarisana nekuenda kwangu uye kuti haizomubatsiri. Zvadaro, patakasvika kumusha, akasunungura ruoko rwake, akakurumidza kutsika uye akazviisa mukati mevatambi vemugwagwa wakamanikana, mumvuri wake unopera pakatarisana.
Chitsauko 16: Kuporesa madotsi
I asiya budiriro saka kare, atova makore matatu ... I apedza rimwe Thousand makumi mazuva mashanu panyika ino, kure ruzivo zvose, mari hurongwa sayenzi, kwandakanga Akadzidza sei kuteerera miti, maruva uye shiri , nokuti vanotaura nesu. Ndivo yakavimbika kukurukura nesu, Kana Tinoteerera mutauro wavo, kuti paradhiso hakusi anozviita upenyu pashure porufu asi zvikuru aripo The Most pazvinhu zvakasikwa. I apedza nguva yakawanda kudaro kutsvaka Love, kuchengeteka, uye kugutsikana ... Asi ini ndadzidza Panguva rwendo urwu kuti zvakanga zvisina noitika gumi nezvitanhatu mufaro pachaKe nokungoti The chete kunoreva clustering nokuti Kuva Zviri kupa vamwe pasina anokuzendamira, kumbozengurira kwete kuzvidemba.
Mangwanani akatevera, shure kwehusiku hurefu hwekufungidzira, ndakaudza rudzi rwechido changu chekubva pachiwi. Ndine kutaura kunonakidza kubva kumukuru Shaman uyo akanga achipesana nekuti ndaida kusiya mukadzi wangu, Houri. Asi, zvisinei, akandipa chibvumirano chake nechinangwa chokuzvidzwa. Paiva nechiitiko chechirangaridzo mukuremekedzwa kwangu saka zuva, pamambakwedza, wizard yekare inonzwa vanhu vachichera miti kuti vaite kambani kaduku. Kwapera vhiki imwechete, rudzi rwose rwakaungana pamhenderekedzo. Vamwe vezvizvarwa vakandipa chipo chekufananidzira kuratidza ushamwari hwavo kwandiri.
Shaman hombe, hunhu hwakaoma uye hwakanyarara hwakandishamisa paakataura mazwi mashoma aya: "rativata shitoni tivatou will cocomora kisanfi ajasou mirugaga maha titikouaka iruba" zvaireva kuti "chiedza chehana chiri mukati mako. Paunonzwisisa izvi, kutsvaga kwekusazivikanwa uye nyota yako yezvisingataurike zvinopera. »Akabva abata ruoko rwake rwakaonda ndokundipa chimwe chezvimedu zvekundidzivirira parwendo rwangu rwese. Ndakamutenda nekugutsirira musoro. Nguva inorwadza kwazvo kwandiri yaive apo Houri paakauya padyo neigwa. Sezvaaisvika padhuze, maziso ake airatidza kushushikana kwake kwese. Akanditsvoda zvishoma pamiromo yangu, ndokufamba achienda.
Ipapo kunyarara kukuru kwakazadza mhepo. Zvadaro, nokuramba ndakanyarara, I akatarisa ichi paradhiso chitsuwa kokupedzisira, pasina shoko, pasina nokuputsa inoshamisa girl mu mifananidzo duku, vachifunga ari shiri pano kana muti pane chinangwa Asi achitarisa nazvo seboka, basking chose Call mune zvakawanda. Pakupedzisira, pashure-ichi nguva zvikuru pakuongorora, ndakasiya pamusoro raanoziva, chikafu manzwiro mufaro rakavhenganiswa kurwadziwa, kudzokera yangu inoshamisa iyi totems zvose uye taboos.
Ichi chiitiko chave chichigoneka kuburikidza nemuviri, uye chasvika pane imwe nhanho yekuziva.
ZVANZI, ndakanga ndisisina anguishes yangu Nechokwadi, dzangu kunetseka zuro uye mangwana, kurarama chete nhasi. Hupenyu hwangu hwave hwakafanana negungwa rakachena risina kuvhara kana mafungu. Ndakanga ndaputirwa nemhepo seboka revarume nevakadzi. Zvadaro, kunyange zvazvo zuva akanyangarika panguva mujengachenga, I Akurudzirwa akananga kupfuura dubious jengachenga, achisiya chete pachangu muforo refu panogasa muchikepe, akataririra panguva wechiSami iri fungidziro yenyika wakakwana kufa kure ...
Het Heru muAfrican Context
Huru huropi hwako - Idriss Aberkane (Audio)
Inzvimbo isina kujaira, inosanganisira injini yekuvandudza yakashandurwa kuhupfumi hweAfrica.
Electromagnetic waves of the devices responsible for our diseases?